बैंक खाताबाटै समृद्धि | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो बैंक खाताबाटै समृद्धि
on: ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०७:३५ तीतो मीठो
सरकार खासगरी प्रम ओली देशमा जसरी पनि समृद्धि ल्याइछाड्ने भनेर सुरुवाल कसेर लागिरहनु भएको छ । त्यसका लागि उहाँले पानीजहाज, रेल हुँदै केही महीनाअघि बिजुलीका पोलहरूबाट समेत सासुकोषको घोषणा गर्नुभयो । त्यसमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले अझै सरकारलाई त्यति साथ दिएका छैनन् । तर, प्रम हतोत्साहित हुनुभएको छैन । त्यै भएर अहिले फेरि सबै नेपालीको एउटा भए पनि बैंकको खाता खोल्दिने अभियानमा होमिनुभएको छ । यति गरेसी देशमा समृद्धि नआई भो त अब ?
हिजो प्रम बन्नु अघि र बन्नासाथ ओलीजीले जुन जुन कामहरू गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो मानिसहरू उहाँले ‘जोक’ गरेको भन्ठान्थे । आज आफ्ना वाचा सम्झँदा उहाँ आफैलाई जोकजस्तो लागेर पक्कै हाँस्नुहुन्छ होला । जनता भने सिरिएस बन्दै गएका छन् । समय बदलिसक्यो क्या !
बैंकले नयाँ खाता सित्तैमा खोल्दिने रे । त्यसमा अझ थप रू. १०० समेत दिने रे । अझ ऋण पनि विनाधितो नै दिने पो हो कि ? यति भएसी समृद्धि आउने त पक्कापक्की नै भो जस्तो छ । खाता नै निःशुल्क खोलेपछि हरेक कारोबार गर्दा समेत बैंकले कुनै शुल्क पक्कै लिँदैन नै होला । यसो गर्दा बैंकको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेजस्तो पनि देखिने ।
सरकारले यति गर्दिएपछि जनताहरू पनि लाइन लाएर बैंकमा खाता खोल्न जानुपर्ने हो । तर, गैरहेका छैनन् । शायद जाने योजना बनाउँदै होलान् । जनताहरूको, खासगरी गाउँगाउँमा, सहकारी र लघुवित्तसँग बढी नै लभ परेको जस्तो छ । त्यसैले ब्याज सयकडा रू. २५ परे पनि सहकारीतिरै लहसिरहेका छन् । सरकारले पहिल्यै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक बलियो खम्बा भनेर घोषणा गर्दिएको कारणले समस्या प¥यो जस्तो छ । अब बैंकलाई चौंथो खम्बा भन्दिने हो कि ? नत्र बैंकहरूले आफूकहाँ खाता खोल, सहकारीको भन्दा सस्तोमा ऋण लैजाऊ भन्दा पनि गाउँलेहरू अझै बैंकतिर नजर लाइरहेका छैनन् बा ! बैकको ब्याजभन्दा व्यवहार महँगो परेर पो हो कि ?
अर्को कुरा, दुनियाँभरमा मान्छेहरू मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्ने बैंकिङमा अभ्यस्त भइसके । तर, हाम्रोमा भने पढेलेखेका मान्छेहरू समेत बैंकसित भन्दा अझै अनौपचारिक व्यक्ति वा संस्थामार्फत कारोबार गर्न लालायित देखिरहेका छन् । यो चैं सीधै सरकारलाई चुनौती दिएको हो भन्ने यो पंक्तिकारको ठम्याइ छ । प्रम ओली पनि के कम हुनुहुन्छ र ? त्यस्ता चुनौतीलाई पछार्न उहाँ लागिरहनु भएको सबैले पोलपोलमा देखिसकेकै छौं । देशमा समृद्धि ल्याउन उहाँले वृद्धभत्ता थप गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । यति भएसी वृद्धभत्ता लिनकै लागि भने पनि मानिसहरूले बैंकमा खाता चैं खोल्न जान्छन् होला । सरकारको मान राख्दिएजस्तो पनि देखिने । यसरी धेरै बैंक खाता खुले समृद्धिको पनि ढोका पक्कै खुल्ला ।
देशमा अहिलेसम्म समृद्धि नआउने कारण के रहेछ भने देशका झण्डै आधा जनसंख्यासँग बैंक खाता नै रहेनछ । आधाउधि जनताहरूले बैंकमा गएर खाता खोलेनछन् । बैंक त स्वयम् जनतामा जाने कुरा भएन । अब सरकारले जसरी पनि अथवा जबर्जस्ती गरेर भए पनि जनतालाई चाहिँ बैंकमा जाने बनाउनै पर्छ । सायद यो सरकारले त्यो सोचिरहेकै पनि होला । अहिलेसम्म सरकारको गतिविधि हेर्दा जबर्जस्ती भए पनि सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्दिन बेर छैन ।
सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउन जति कार्यक्रमहरू ल्याए पनि धेरैले त्यसलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएकोले पनि समस्या परेको हुनसक्छ । हिजो प्रम बन्नु अघि र बन्नासाथ ओलीजीले जुन जुन कामहरू गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो मानिसहरू उहाँले ‘जोक’ गरेको भन्ठान्थे । उहाँ सिरिएस हुनुहुन्थ्यो । तर, आज आफ्ना वाचा सम्झँदा उहाँ आफैलाई जोकजस्तो लागेर पक्कै हाँस्नुहुन्छ होला । जनता भने सिरिएस बन्दै गएका छन् । समय बदलिसक्यो क्या !
विश्वमै अहिले एक किसिमको आर्थिक मन्दीजस्तो चलिराछ क्यारे । भलै आफ्नो त सदैव यही एकमात्र अवस्था हो । त्यसकारण मनले चाहेर पनि नयाँ बैंक खाता खोल्न सकिएन । तर, सरकारको बैंक खाताबाट समृद्धिको योजनालाई साथ दिनु सबै नेपालीको कर्तव्य चैं हो है !